Lifree Diaper Pant M (10 Pcs)
Wipe နှင့် ဂွမ်းလုံး
သန့်ရှင်းရေး နှင့် ကျန်းမာရေး
ချိုလိမ် နှင့် feeder
ရင်ခံ နှင့် သွားရည်ခံ
လိုးရှင်း၊ အဆီ၊ ပေါင်ဒါ
စာအုပ် နှင့် CD
သင်ကြားရေး နှင့် ဉာဏ်စမ်း
October Promotion - Lifree Diaper Pant All Items 10% Off ( 01.10.2021 - 31.10.2021 )
* Quantity 1234567 8910 11 12
(Lifree Diaper Pant )ဘောင်းဘီဒိုက်ဘာဟာတစ်ထုတ်တွင် 10 ခုပါဝင်ပြီးလူကြီးခါးဆိုဒ် 23လက်မ မှ34လက်မ ထိဝတ်ဆင်နိုင်သော Medium ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့်ဆီး၊ဝမ်းမထိန်းနိုင်သော ဘိုးဘိုးဘွားဘွားများ၊ လှုပ်ရှားသွားလာရန်ခက်ခဲသော နာတာရှည်လူနာများ၊ ခရီးဝေးသွားမည့်လူကြီးများ၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော နှင့်ချောင်းဆိုးရင်ဆီးမထိန်းနိုင်သူများအတွက် အလွန်ဝတ်ဆင်ရအဆင်ပြေသော လူကြီးသေးခံဘောင်းဘီပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပါးလွှာတဲ့မျက်နှာပြင်နှင့် နူးညံ့ပျော့ပြောင်းတဲ့ ကျုံ့ရဆန့်ရလွယ်ကူသောခါးစည်းကြောင့် ဒိုက်ဘာဝတ်ထားမှန်းမသိသာစေတဲ့အပြင် ကိုယ်တိုင်လည်းအလွယ်တကူဝတ်ဆင်နိုင်သလို၊ အခြားသူကဝတ်ဆင်ပေးရင်လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဂျပန်နည်းပညာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားပြီး နူးညံ့သောအသားကိုအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေကာ စိုထိုင်းမှုမရှိစေလို့ အရေပြားပွန်းခြင်း၊ လောင်ခြင်းမျိုးမဖြစ်စေပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ကွက်တိကျပြီးယိုစိမ့်မှုမရှိဘဲ စုပ်ယူမှုအားကောင်းသော ဂျယ်ပါဝင်တာကြောင့် 450 CC အထိစုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး ဆီးအကြိမ်ရေအားဖြင့် (၃)ကြိမ်မှ(၄)ကြိမ် အထိ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ပျမ်းမျအားဖြင့်လူကြီးများ ဆီးသွားနှုန်းမှာတစ်ကြိမ်လျှင် 120 CC ၀န်းကျင်ရှိပါတယ်။
ဘက်တီးရီးယားကြောင့် အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးတဲ့ Anti Bacterial Polymer အလွှာပါဝင်သဖြင့် အနံအသက်ဆိုးများထွက်ခြင်းကိုလျှော့ချပေးပါတယ် ။
-Lifree Diaper Pant
-Size- Medium ,ခါးဆိုဒ်( 23-34လက်မ)ထိဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်း
-တစ်ထုတ်တွင်10 Pcs ပါဝင်ခြင်း
-Gel Type အမျိုးအစားဖြစ်ခြင်း
-Polymer,Non Woven Fabric ,Paper Tissue,Pulp,Polyethylene Film,Polyurethane တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း
-Men or Women နှစ်မျိုးစလုံးဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်း
-Made in Thailand
tracker id:3#8410
Lifree Adult Diaper Pant L(10 pcs)
8,200 7,380 Ks 10% off
Lifree Diaper Pant XL (8 Pcs)
Comfree Adult Diaper L 10pcs
5,450 Ks Sold Out
Lifree Diaper Tape M (10 Pcs)
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အိမ်အရောက် ငွေချေစနစ် ရှိပါတယ်။
၉ am မှ ၉ pm အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Kyarlay isaleading mum & baby eCommerce platform in Myanmar. We partner withawide rage of distributors to bring mum & baby products to your home doorstep for your convenience. Our product listings are comprehensive and we offer 3-day shipping within Yangon.
69, Waizayanta Rd, South Okkalapa, Yangon.
09966162404, 09966162405, 09966162406
Kyarlay.com is owned by Momolay Pte Ltd (201532899W) with registered office at 150 Cecil Street, #03-00, Singapore, 069543.
Wipe & Cotton Ball
Detergent & Softner
Baby Hair Cutter
6 months above
Above 8 months
Above 1 year
Above2years
Breast Milk Storage Bags/Bottle
Nipple Care Cream
Dishes & Cup
Pacifier, Teether & Feeder
Bottle and Nipple Brush
Nipple Liquid Cleanser
Lotion, Oil, Powder
Lotions, Oils & Powsers
Swimming Pool and Neck Swim
Story (Mya, Eng)
Myanmar History Story Book
English Story Book
Myanmar Story Book
Dot to Dot Coloring Book
Learning & Puzzles
Cheek & others
Copyright © 2019 Kyarlay . All Rights Reserved.